အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ (2016) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: Prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က (2016)
comments: လေ့လာမှုတွင်“ Compulsive လိင်အပြုအမူ (CSB)” ဟူသောဝေါဟာရကိုအသုံးပြုသော်လည်းဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများဖြစ်သည် (ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုတွေ့မြင်) ။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB ဘာသာရပ်များလက်ဝဲ amygdala အသံအတိုးအကျယ်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လက်ဝဲ amygdala နှင့်နှစ်နိုင်ငံ dorsolateral prefrontal cortex DLPFC အကြားကြွင်းသောအရာစဉ်အတွင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျှော့ချ။ စာရေးသူကောက်ချက်ချ:
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အထက်မှအောက်သို့တစ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ်ပတ်သက်နေဒေသနှင့် prefrontal ၏အောက်ပိုင်းကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုခြီးမွှောကျ volumes ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်ပြတ်တောက်မက်လုံးပေးတွေကိုအဓိကရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဓိကဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင် reactivity ကိုမျက်နှာထစ်အငေါ့အမူအကျင့်ပုံစံများကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုထည်ကြီးမားသောတွေ့ရှိချက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (Sud) တွင်သူတို့နှင့်အတူနှိုငျးယှဉျပေမယ့်အဲဒီတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
#1 ရှာဖွေတာကိုဘာသာပြန်စာပေ): "ဒီ amygdala & dorsolateral prefrontal cortex အကြားလျော့နည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု။ " amygdala စိတ်ဖိစီးမှု processing, ငါတို့စိတ်ဖိစီးမှုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအပါအဝင်အဓိကအခန်းကဏ္ including မှပါဝင်သည်။ amygdala ပြင်းထန်သောထိုကဲ့သို့သောဆွဲ, cue- ဓာတ်ပြုမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအဖြစ်စွဲ၏များစွာသောရှုထောင့်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ အဆိုပါ amygdala နှင့် prefrontal cortex အကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလျှော့ချပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် aligns ။ ပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုသည်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူတွင်အသုံးပြုရန်အသုံးပြုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုအပေါ် prefrontal cortex ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်ဟုယူဆရသည်
#2 ရှာဖွေတာကိုဘာသာပြန်စာပေ): "တိုးပွားလာ amygdala အသံအတိုးအကျယ်" (ဆိုလိုသည်မှာပိုပြီးမီးခိုးရောင်ကိစ္စဆိုလိုသည်) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုလေ့လာမှုအများစုတွင်ဆေးစွဲသူများ (မီးခိုးရောင်ကိစ္စ) ပိုနည်းသည်။ ဒီလေ့လာမှုကမူးယစ်ဆေးဝါးအဆိပ်သင့်မှုဟာမီးခိုးရောင်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပြီးမူးယစ်ဆေးစွဲသူများအတွက် amygdala ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ ယုံမှားစရာမရှိဒီဒီအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ သတိပြုရမည်မှာအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသမှုကိုစတင်သောအခါ၊ ဥပမာအားဖြင့် tab မှ tab သို့နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများရှာဖွေခြင်းသည် amygdala ကိုလင်းစေလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စဉ်ဆက်မပြတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက် amygdala အပေါ်တစ်မူထူးခြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေအသစ်အဆန်းများနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာကြံ။
porn စွဲအတွက် သာ. ကြီးမြတ် amygdala volume အတှကျအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်: နှစ်ပေါင်းများစွာအတင်းအဓမ္မညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ထို CSB ဘာသာရပ်များသည်လိင်စွဲလမ်းသူများသာမက သူတို့သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှု (အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ၊ ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် ED ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) ကြောင့်ဆိုးရွားသည့်ဆိုးကျိုးများခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီမှာအဓိကအချက်ပါ။ နာတာရှည်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုတိုးလာ amygdala အသံအတိုးအကျယ်မှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်:
plasticity ၏တိကျသောယန္တရားများနေဆဲအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်, ပြင်းထန်သောစိတ်ဖိစီးမှုမှအလယ်အလတ်အဆိုပါ amygdala အတော်ကြာကဏ္ဍကြီးထွားတိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာသော, သော်လည်းအဆိုပါ hippocampus နှင့် prefrontal cortex အတွက်ဆိုးကျိုးများဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ဒီအလငျး၌အထက်ပါတွေ့ရှိချက်ကိုစဉ်းစား "လိင်စွဲ" မှာ hyperactive HPA ဝင်ရိုးရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း 2015 လေ့လာမှု (တစ်ဦး overactive စိတ်ဖိစီးမှုသည့်စနစ်) ။ porn / လိင်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, လိင်ထူးခြားသောစေအချက်များနှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မလား? နောက်ဆုံးအနေနဲ့အောက်ပိုင်း amygdala အသံအတိုးအကျယ်အဖြစ်, အရက်သမားတစ်ဦး Pre-ရှိပြီးသားအခွအေနေပါလိမ့်မယ် အရက်၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူမိသားစုများအတွက်သားစဉ်မြေးဆက်သေးငယ် amygdalae ရှိသည်။
Casper Schmidt က,1,2,3 Laurel အက်စ်မောရစ်,1,4 Timo အယ်လ် Kvamme,1,2,3 Paula ခန်းမ,5 Thaddeus Birchard,5 နှင့် Valerie Voon1,4,6 *
ပထမဦးစွာထုတ်ဝေ: 27 အောက်တိုဘာလ 2016 အပြည့်အဝထုတ်ဝေသမိုင်း
Doi: 10.1002 / hbm.23447 ကြည့်ရန် / ကိုးကားကယ်တင်
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) အတော်လေးဘုံနှင့်အသိသာပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်လူမှုရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအခြေခံ neurobiology နေဆဲညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုဦးနှောက် volumes ကိုကို examine နှင့်ကိုက်ညီကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) နဲ့နှိုင်းယှဉ် CSB အတွက်ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအနားယူ။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI (MPRAGE) ဒေတာ 92 ဘာသာရပ်များ (23 CSB အထီးနှင့်အ 69 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီး HV) တွင်စုဆောင်း voxel-based morphometry သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ Multi-ပဲ့တင်သံပြို sequence ကိုနှင့်လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ME-နှင့် ICA) သုံးပြီး data ကို 68 ဘာသာရပ်များ (23 CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 45 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် HV) တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI အနားယူ။
CSB ဘာသာရပ်များ Bonferroni ချိန်ညှိမီးခိုးရောင်ကိစ္စ volumes ကို (သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကိုဆုံး, amygdala သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲပြသ P <0.01) နှင့်လက်ဝဲ amygdala အမျိုးအနွယ်နှင့်နှစ်နိုင်ငံ dorsolateral prefrontal cortex အကြားလျှော့ချအနားယူပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု (တပြင်လုံးကို ဦး နှောက်, စပျစ်သီးပြွတ် FWE တညျ့ P <0.05) HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
CSB စိတ်ခွန်အားနိုး salience နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် prefrontal ထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့် limbic ဒေသများအကြားချို့ယွင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုမှသက်ဆိုင်ရာ limbic ဒေသများတွင်မြင့်မားသော volumes ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤတွေ့ရှိချက်အပြုအမူတွေစတင်ခြင်း predate သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်းအန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် longitudinal အစီအမံအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သင့်တယ်။
GLM ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်
MPRAGE သံလိုက်ကိုပြင်ဆင် gradient ကို-ပဲ့တင်သံ
SPM စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), အစ hypersexual ရောဂါသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအဖြစ်လူသိများ, (3% -6% မှာခန့်မှန်းခြေ) အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည် [Kraus et al ။ , 2016] နှင့်သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်တဏှာ, Impulse, လူမှုရေးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ချို့ယွင်း [Kraus et al ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခံရအပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်။ , 2016] ။ မကြာမီကလေ့လာမှုများ [neurobiological ဆက်စပ်မှုအခြေခံနားလည်မှုအပေါ် Kraus et al အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ။ , 2016] လေ့လာမှုများများ၏နည်းပါးနောက်ခံယန္တရားများကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့သောဤပုံမမှန် conceptualize စေခြင်းငှါ, ပေမယ့်။ CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါတစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူစွဲ [Kraus et al ဖြစ်စေအဖြစ် conceptualized လျက်ရှိသည်။ , 2016] ။ သို့သော်ပေမယ့် hypersexual ရောဂါများအတွက်စံအဆိုပါ DSM-5 များအတွက်အဆိုပြုနှင့်လယ်ပြင်စမ်းသပ်မှု [Reid et al အတွက်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ , 2012] အင်တာနက်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်း၏ရောဂါဗေဒအသုံးပြုမှုနှင့်အတူဒီရောဂါ, အခြေအနေအပေါ်ကန့်သတ်ဒေတာကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသထဲမှာ, DSM-5 ၏အဓိကအပိုင်းများတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် CSB အပေါ်ထပ်မံလေ့လာမှုများကဤပုံမမှန်၏ကြီးမြတ်သောနားလည်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ CSB အပြုအမူတွေတစ်အကွာအဝေးရှိသည်နိုငျသျောလညျး, ဒီမှာကျွန်တော် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူမြင်သာထင်သာအခက်အခဲများသတင်းပို့အုပ်စုတစ်စုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "compulsive" ဟုထပ်တလဲလဲ phenomenology ဖော်ပြထားတယ်ခြင်းနှင့်မဆို mechanistic သို့မဟုတ် etiological ယူဆချက်ဆိုလိုရည်ရွယ်သည်မဟုတ်သောယူဆချက်အပေါ်ဟူသောဝေါဟာရကို CSB အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ voxel-based morphometry (VBM) သို့မဟုတ် cortical အထူဖြစ်စေသုံးပြီးအမူအကျင့်စွဲလမ်းအပေါ်စာပေ၏သုံးသပ်ချက်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ (PubMed အပေါ်အောက်ပါရှာဖွေရေးစကားလုံးများကိုအသုံးပြုခဲ့http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed): '[("voxel-based morphometry" သို့မဟုတ် "cortical အထူ") နှင့်'၊ '' [ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း၊ ”“ [အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု]၊ ”“ [အင်တာနက်ရောဂါ]၊ ”၊ ”၊ [ဂိမ်းစွဲ] ။ " စုစုပေါင်း VBM နှင့် cortical အထူကိုအကဲဖြတ်သည့်လောင်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုတွင်လေ့လာမှု ၁၃ ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည် 1 အောက်တွင်ဆွေးနွေးကြသည်။
အမူအကျင့်စွဲချက်အပေါ် volumetric နှင့် cortical အထူလေ့လာမှု၏စားပွဲတင် 1. စာပေပြန်လည်သုံးသပ်
ဘာသာရပ်များ (P / HV)
အတိုကောက်: HV, ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း; P ကိုလူနာ; r, ညာ; ဌ, left; BL, နှစ်နိုင်ငံ; GM ကမီးခိုးရောင်ကိစ္စ; WM, အဖြူရောင်ကိစ္စ; ACC, anterior cingulate cortex; သမဝါယမ, cerebellum; CG, cingulate gyrus; CN, caudate နျူကလိယ; DLPFC, dorsolateral prefrontal cortex; HIPP, hippocampus; IC, နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex; IFG, ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus; IPC, ယုတ်ညံ့ parietal cortex; ITG, ယုတ်ညံ့ယာယီ gyrus; Ling, lingual gyrus; LOFC, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် orbitofrontal cortex; MFC, အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ cortex; MOFC, medial orbitofrontal cortex; MTG, အလယ်တန်းယာယီ gyrus; OFC, orbitofrontal cortex; ကျုံ့သွားစေပါတယ်, posterior cingulate cortex; PCG, Post-အလယ်ပိုင်း gyrus; PCUN, precuneus; PrCG, Pre-အလယ်ပိုင်း gyrus; PFC, prefrontal cortex; PHG, parahippocampal gyrus; RACC, rostral anterior cingulate cortex; RMFC, rostral အလယ်တန်းတိုကျရိုကျ cortex; SFC, သာလွန်တိုကျရိုကျ cortex; SMA, ဖြည့်စွက်မော်တာဧရိယာ; SPC, သာလွန် parietal cortex; VS, ventral striatum ။
[Grant က et al ။ , 2015] လောင်းကစားရောဂါ 16 / 17 cortical ထူ r-SFC, RMFC, MOFC, PCG နဲ့ BL-IPC အတွက် cortical ထူလျော့နည်းသွား
[Joutsa et al ။ , 2011] ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း 12 / 12 Voxel-based morphometry HV နှင့်လူနာများအကြား GM ကသို့မဟုတ် WM အတွက်အဘယ်သူမျှမထုထည်ကြီးမားသောခြားနားချက်များ
[Koehler et al ။ , 2013] ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း 20 / 21 Voxel-based morphometry တိုးမြှင့် BL-VS အတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့် r-PFC
[ဗန် Holst et al ။ , 2012] ပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်း 40 / 54 Voxel-based morphometry ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေနှင့် HV အကြား GM ကသို့မဟုတ် WM အတွက်အဘယ်သူမျှမထုထည်ကြီးမားသောခြားနားချက်များ
[ဟောင်ကောင် et al ။ , 2013] အင်တာနက်စွဲ 15 / 15 cortical ထူ r-LOFC အတွက်လျော့နည်းသွား cortical ထူ
[ယွမ် et al ။ , 2011] အင်တာနက်စွဲ 18 / 18 Voxel-based morphometry DLPFC, SMA, OFC, သမဝါယမ, RACC အတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွား
[Zhou et al ။ , 2011] အင်တာနက်စွဲ 15 / 18 Voxel-based morphometry ဌ-ACC, ကျုံ့သွားစေပါတယ်, IC, Ling အတွက် GM ကသိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွား
[လင်း et al ။ , 2014] အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲလမ်း 35 / 36 Voxel-based morphometry အဆိုပါ IFG, ဌ-CG, IC နှင့် r-HIPP အတွက် GM ကသိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွား
IFG, IC, IPC, ACC အတွက် WM သိပ်သည်းဆလျော့နည်းသွား
[Sun က et al ။ , 2014] အင်တာနက်ကဂိမ်းစွဲလမ်း 18 / 21 Voxel-based morphometry အဆိုပါ r-ITG, MTG, PHG အတွက်တိုးမြှင့် GM ကအသံအတိုးအကျယ်
ဌ-PrCG အတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွား
[ဝမ် et al ။ , 2015] အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ 28 / 28 Voxel-based morphometry ACC, PCUN, SMA, SPC နှင့်ဌ-DLPFC, IC, သမဝါယမအတွက် GM ကအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွား
[Cai et al ။ , 2015] အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ 27 / 30 Subcortical အသံအတိုးအကျယ်, FreeSurfer CN နှင့် VS ၏တိုးလာ volumes ကို
[Weng et al ။ , 2013] အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း 17 / 17 Voxel-based morphometry r-OFC, SMA နှင့် BL-IC ထဲမှာ GM ကအသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွား
[ယွမ် et al ။ , 2013] အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်း 18 / 18 cortical ထူ ဌ-PrCG, PCUN, MFC, ITG, MTG အတွက်တိုးမြှင့် cortical ထူ
r-PCG, IPC, ဌ-LOFC, IC အတွက် cortical ထူလျော့နည်းသွား
စှဲအတွက်အာရုံကြောနှောင့်အယှက်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်သောဥစ်စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (Sud) ၏လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။ အထူးသဖြင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ် subserve ကြောင်း prefrontal cortical ဒေသများတွင် cortical ဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အထူအတွက် Sud ရှိုးလျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ။9လေ့လာမှုများနှင့် 296 အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကမကြာသေးခင်က Meta-analysis သည် anterior cingulate cortex (ACC) [Xiao et al အပါအဝင်သိသိသာသာလျှော့ချ prefrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စ (GM က) volumes ကိုတွေ့။ , 2015] အဆိုးတစ်သက်တာအရက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိတိုကျရိုကျ cortical GM ကအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ [Taki et al ကိုအသုံးပြုပါ။ , 2006] ။ Prefrontal GM က volumes ကိုအလားတူ [orbitofrontal cortex (OFC) တွင်အပါအဝင်ကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် Rando et al လျှော့ချပေးခဲ့သည်။ , 2013; Tanabe et al ။ , 2009] anterior prefrontal cortex [Rando et al ။ , 2013] နှင့် ACC [Connolly et al ။ , 2013] မူးယစ်ဆေး [Connolly et al ကိုအသုံးပြုဖို့နှစ်နှင့်ဆက်စပ်အဆုံးစွန်။ , 2013].
cortical volumes ကိုများနှင့်အထူအတွက် Group မှခြားနားချက်များအမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်လျော့နည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပြီ (စားပွဲတင်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ် 1) ။ လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါသုံးမျိုးသေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုများ [Grant က et al မျိုးစုံ prefrontal နှင့် parietal ဒေသများတွင် cortical ထူလျော့နည်းသွားဖြစ်စေနှင့်အတူကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်ပြသခဲ့သည်။ , 2015] Koehler et al [ညာဘက် prefrontal cortex အတွက် volumes ကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ , 2013] သို့မဟုတ်လုံးဝမအုပျစုကွဲပြားမှု [Joutsa et al ။ , 2011] ။ ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ၏ကြီးမားသောလေ့လာမှုမှာမရှိအုပ်စုကိုကွဲပြားခြားနားမှုဦးနှောက် volumes ကို [ဗန် Holst et al အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ , 2012] ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက်တစ်ခုမှာသေးငယ်တဲ့လေ့လာမှုဟောင်ကောင် et al [သည့် OFC အတွက်အနိမ့် cortical ထူပြသခဲ့သည်။ , 2013] dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) တွင်အခြားအစီရင်ခံနိမ့်အသံအတိုးအကျယ် [ယွမ် et al အတူ။ , 2011] နှင့်အောက်ပိုင်း ACC volumes ကိုအကြံပြုနှစ်ခုလေ့လာမှုများ [ယွမ် et al ။ , 2011; zhou et al ။ , 2011] ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားမမှန်နှစ်ခုအသေးလေ့လာမှုများအစီရင်ခံ Weng et al [OFC အတွက် volumes ကိုယုတ်လျော့။ , 2013; ယွမ် et al ။ , 2013] နှစ်ယောက်ပိုကြီးလေ့လာမှုများ [Lin က et al cingulate cortex အတွက်သေးငယ် volumes ကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ , 2014; ဝမ် et al ။ , 2015] DLPFC အတွက်လျှောက်လျော့နည်းသတင်းပို့တစ်ခုတည်းလေ့လာမှုများ [ဝမ် et al အတူ။ , 2015] ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ [Lin က et al ။ , 2014] သာလွန် parietal [ဝမ် et al ။ , 2015] နှင့်ယုတ်ညံ့ parietal [ယွမ် et al ။ , 2013] cortical ။ subcortical အဆောက်အဦမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, တဦးတည်းအသေးစားလေ့လာမှုလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ [Koehler et al အတွက်ပိုမိုမြင့်မား ventral striatal (VS) volumes ကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ , 2013] အခြားလေ့လာမှုများအစီရင်ခံခြင်းမရှိ subcortical ကွဲပြားခြားနားမှုအတူ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါများတွင်တွေ့ရှိချက် သာ. ကြီးမြတ် parahippocampal [Sun က et al ဖြစ်စေနှင့်အတူအလားတူကိုက်ညီမှုရှိကြ၏။ , 2014] အောက်ပိုင်း hippocampal [Lin က et al ။ , 2014] သို့မဟုတ်လုံးဝမကွဲပြားမှု [ဝမ် et al ။ , 2015; Weng et al ။ , 2013] ။ subcortical volumes ကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နမူနာအရွယ်အစားနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု Cai et al [သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ် သာ. ကြီးမြတ် caudate နှင့် VS volumes ကိုရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ , 2015] ။ အတူတူယူ, လောင်းကစားရောဂါအတွက်သို့မဟုတ် cortical subcortical မူမမှန်များ၏တွေ့ရှိချက်များအလွန်အမင်းကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားအတွက် cortical မူမမှန်များ၏အစီရင်ခံစာများကိုပိုပြီးတသမတ်တည်းနှင့်အတူလျော့နည်းသွား volumes ကိုသတင်းပို့သည်အနည်းဆုံးနှစ်ခုလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးပုံတူကူးယူ ACC နှင့် OFC အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။
ယနေ့အထိ, CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအာရုံကြောပြောင်းလဲမှုများကျဲသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ CSB တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမရှိဘဲအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီ၏လေ့လာရေးညာဘက် caudate အတွက်အနိမ့် GM က volumes ကို [Kühnနှင့် Gallinat ပြ 2014] ။ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ပျံ့နှံ့ MRI လေ့လာမှု (N = အုပ်စုတစ်စုလျှင် 8) HV [Miner et al ။ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ] သာလွန်တိုကျရိုကျအဖြူကိစ္စ (WM) ဝေစာများတွင်ယုတ်ပျံ့လျှော့ချပြသခဲ့သည်။ , 2009] ။ အလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, အထီး HV ပြပွဲတိုးမြှင့်ငြိမ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေ [Kühnနှင့် Gallinat မှအောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal BOLD လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူလေ့ဖြစ်စဉ်များ 2014] နှင့်အနိမ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေနှောင်းပိုင်းမှအပြုသဘောအလားအလာ [Prause et al ။ , 2015] ။ ဆနျ့ကငျြ, HV နှင့်အတူ CSB နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတာဝန်-based fMRI လေ့လာမှုအတွက်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ Voon et al [ပိုမိုမြင့်မား VS, amygdala နှင့် CSB အတွက် dorsal ACC BOLD တုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်း။ , 2014] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြံပြုခြင်း CSB ဘာသာရပ်များမှာ "လို" ဘဲ "ကဲ့သို့" ၏ကာအညွှန်းကိန်းဆက်နွယ်နေကြောင်း, ဤဒေသများအကြား functional ဆက်သွယ်မှု, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ paralleling ။ အလားတူပင်အမှတ်တံဆိပ် et al [အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအတွက်အခြားလေ့လာမှုအတွက်ဦးစားပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ image ကို သာ. ကြီးမြတ် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏အခြားအစီအမံတွေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်မ Self-အစီရင်ခံလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်း။ , 2016] ။ နောက်ထပ်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုလည်းပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းပိုပြီးမကြာခဏနှင့်မြှင့်တင်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကြုံတွေ့ကွောငျးဖျောပွသနှင့် သာ. ကြီးမြတ် activation ဤအုပျစုထဲမှာ caudate, ယုတ်ညံ့ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, dorsal anterior cingulate gyrus, thalamus, နှင့် DLPFC အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ [Seok နှင့် Sohn, 2015] ။ CSB တစ်ဦးချင်းစီထပ်မံရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု [Mechelmans et al ပိုမိုအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုကိုပြသ။ , 2014] ကြောင်း BANCA et al [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှအေးစက်တွေကိုအဘို့ရှေးခယျြမှုဦးစားပေးဆက်နွယ်နေကြောင်း။ , 2016] ။ ငြိမ်ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေ၏ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုမှတုန့်ပြန်မှာတော့ CSB ဘာသာရပ်များဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့ရှေးခယျြမှုဦးစားပေးဆက်နွယ်နေကြောင်းထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ [BANCA et al ဖို့ dorsal ACC အတွက် သာ. ကွီးမွတျလေ့ပြသခဲ့သည်။ , 2016] တစ်ခုခုကိုလေ့တို့ကရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါဒါပေမယ့်လည်းစွဲလမ်းထဲမှာသည်းခံစိတ်၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်အံ့သောငှါတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု။
လက်ရှိလေ့လာမှု CSB အတွက်ထုထည်ကြီးမားသော GM ကကို examine နှင့်လောင်းကစားရောဂါနှင့်အင်တာနက်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်ထုထည်ကြီးမားသောနှင့် cortical ထူလေ့လာမှုများပေါ်ရှိလက်ရှိစာပေပြန်လည်သုံးသပ်။ BOLD အချက်ပြမှုများ linear ပဲ့တင်သံအချိန် (TE) -dependent signal ကိုပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်ဖော်ထုတ်နေကြစဉ်တွင်ကျနော်တို့ကိုလည်းဝတ္ထု Multi-ပဲ့တင်သံပြို sequence ကိုနှင့်လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ME-နှင့် ICA) နဲ့ CSB နှင့်ကိုက်ညီ HV နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအနားယူဆနျးစစျ Non-BOLD အချက်ပြမှုများကို TE-လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ [Kundu et al အဖြစ်ဖော်ထုတ်နေကြသော်လည်း။ , 2012] ။ ကျနော်တို့ amygdala, VS နှင့် dorsal ACC တို့က subserved salience နှင့်ဆုလာဘ်-related စနစ်များတစ်ဦးနှောင့်အယှက်ကွန်ယက်ကိုမျှော်လင့်ထား။
CSB ဘာသာရပ်များအင်တာနက်-based ကြော်ငြာများမှတဆင့်များနှင့်ကုသရာမှရည်ညွှန်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီး HV အရှေ့ Anglia ဧရိယာထဲမှာလူထုအခြေပြုကြော်ငြာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံး CSB ဘာသာရပ်များသူတို့ [hypersexual ရောဂါနှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Kafka အဆိုပြုထားအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး (CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည် 2010; ရိဒ် et al ။ , 2012] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ [Carnes et al ။ , 2007], အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။ ဒါကအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေး (ASES) [Mcgahuey et al တစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ , 2011] မေးခွန်းများကို သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ချို့ယွင်းကိုယ်စားပြုပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များနှင့်အတူ, 1-8 တစ်စကေးအပေါ်ဖြေကြားခဲ့သည်ရသော။ အဆိုပါတွေကို၏သဘောသဘာဝပေးထား, ရှိသမျှ CSB ဘာသာရပ်များနှင့် HV ယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ အားလုံး HV CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အတူအသက်-လိုက်ဖက် (အသက်၏5နှစ်ပေါင်း±) တို့ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ [ယခင်က BANCA et al ပွုပါပွီအဖြစ်ဘာသာရပ်များလည်း MRI ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုအတှကျအပြခံခဲ့ရသည်။ , 2016; Mechelmans et al ။ , 2014; Voon et al ။ , 2014] ။ သီးခြားသတ်မှတ်ချက်အသက် 18 နှစ်အောက်ဖြစ်ခြင်း Sud တစ်သမိုင်းရှိခြင်း, (ဆေးခြောက်အပါအဝင်) တရားမဝင်တ္ထုများတစ်ခုကလက်ရှိပုံမှန်အသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်း, နှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ်-ပြင်းထန်အဓိကစိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ရောဂါအပါအဝင်လေးနက်စိတ်ရောဂါရောဂါ, ရှိခြင်း, သို့မဟုတ်ထည့်သွင်း စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia (ထို Mini ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Inventory သုံးပြီးပြ) [Sheehan et al ၏သမိုင်း။ , 1998] ။ အခွားသော compulsive သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲကိုလည်းချန်လှပ်ခဲ့သညျ။ ဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ် compulsive စျေးဝယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့စိတ်ရောဂါများကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များအတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး [Whiteside နှင့် Lynam, ပြီးစီးခဲ့ 2001] Impulse အကဲဖြတ်ရန်, နှင့် Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory [Beck et al ရန်။ , 1961] စိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်ရန်။ 23 CSB ဘာသာရပ်များနှစျယောကျစိတ်မကျဆေး Antidepressants ယူပြီးခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia (comorbid ခဲ့သည်N = 2) သို့မဟုတ်လူမှုရေး phobia (N = 1) သို့မဟုတ် ADHD ၏ကလေးဘဝသမိုင်း (N = 1) ။ ရေးသားထားသောအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးထိုလေ့လာမှုကိုကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
= အထပ်ထပ်အချိန် (TR); ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံရိပ်တွေဟာ T3 ချိန် MPRAGE sequence ကို (32 sagittal ချပ်, 1 မိနစ် Scan ဖတ်သုံးပြီး 176-ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်နှင့်အတူတစ်ဦး Siemens တိTrió 9T-Scanner ကို အသုံးပြု. အပြည့်အဝသံလိုက်ကိုပြင်ဆင် gradient ကို-ပဲ့တင်သံ (MPRAGE) အပါအဝင်စုဆောင်းခဲ့ကြ 2,500 ms; အချိန်ပဲ့တင်သံ (TE) = 4.77 ms; ပြောင်းပြန်လှန်အချိန် = 1,100 ms; ဝယ်ယူ matrix ကို = 256 × 256 × 176; လှန်ထောင့် =7°; voxel အရွယ်အစား 1 × 1 × 1 မီလီမီတာ) ။ scanning ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကအဆိုပါ Wolfson ဦးနှောက် Imaging Center မှာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒေတာစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM8 နှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌ခဲ့သည်; http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spmNeuroimaging, လန်ဒန်အဘို့) (Wellcome Trust မှစင်တာ, ဗြိတိန်) ။ ခန္ဓာဗေဒပုံတွေကို anterior commissure မှာမူလအစအားမရ, Re-orientation ကို manually ခဲ့ကြသည်။ ပုံရိပ်တွေတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်သျှူးအမျိုးအစားများအတွက်စံတစ်ရှူးဖြစ်နိုင်ခြေပြမြေပုံများအပေါ်အခြေခံပြီး GM က, WM နှင့် cerebrospinal fluid (CSF) သို့ (SPM များအတွက်နယူးအပိုင်းကိုသုံးပြီး) segmented ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါသုံးတစ်ရှူးလူတန်းစား volumes ကိုခန့်မှန်းခြေစုစုပေါင်း intracranial အသံအတိုးအကျယ်ထုတ်လုပ်ရန်ချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကထုံးစံ template ကို DARTEL [Ashburner, ကိုအသုံးပြုပြီးဖန်တီးခဲ့ 2007] သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ဇာတိဂျီဂျီပုံရိပ်ကိုဘုံနေရာတစ်ခုအနေနှင့်၊ ဤ DARTEL template ကိုထို့နောက်တစ်သျှူးဖြစ်နိုင်ခြေမြေပုံများတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ affine အသွင်ပြောင်းမှုများနှင့်ပုံရိပ်များကို MNI အာကာသသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည် ပုံများကို ၈ မီလီမီတာ၏တစ်ဝက်အများဆုံး kernel တွင်အကျယ်အပြည့်နှင့်ပြည့်စုံစွာချထားသည်3.
ပြည်နယ် fMRI ဒေတာအနားယူပု Wolfson ဦးနှောက် Imaging စင်တာ, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က 10-ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်နှင့်အတူတစ်ဦး Siemens 3T တိTrióစကင်နာများနှင့်ပွင့်လင်းမျက်စိနှင့် 32 မိနစ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက Multi-ပဲ့တင်သံပဲ့တင်သံပြိုပုံရိပ် sequence ကိုအွန်လိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး (အထပ်ထပ်အချိန်, 2.47 s ဖြင့်အသုံးပြုခဲ့သည်; လှန်ထောင့်, 78 °; matrix ကိုအရွယ်အစား 64 × 64; In-လေယာဉ် Resolution, 3.75 မီလီမီတာ; FOV, 240 မီလီမီတာ; 32 Oblique ချပ်, ပြောင်း အချပ် 3.75% ကွာဟမှုတွေနဲ့ဝယ်ယူအချပ်အထူ 10 မီလီမီတာ; iPAT အချက်, 3; bandwidth ကို = 1,698 Hz / pixel; အချိန်ပဲ့တင်သံ (TE) = 12, 28, 44 နှင့် 60 ms) ။
လွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ME-ICAv2.5 beta6 multi-ပဲ့တင်သံ; http://afni.nimh.nih.gov) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Multi-ပဲ့တင်သံကျိန်းဝပ်ပြည်နယ် fMRI အချက်အလက်များ၏ de-ဆူညံသံအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ME-နှင့် ICA FastICA နှင့်အတူလွတ်လပ်သောအစိတ်အပိုင်းများသို့ Multi-ပဲ့တင်သံ fMRI ဒေတာ decomposes ။ BOLD signal ကိုရာခိုင်နှုန်းက signal ကိုပြောင်းလဲမှုကို TE, အ T2 * ယိုယွင်းနေတဲ့ဝိသေသအပေါ် linearly မှီခိုသည်။ ဤသည် TE-မှီခိုအဆိုပါ pseudo- သုံးပြီးတိုင်းတာFTE မြင့်မားသော Kappa ရမှတ်များရှိခြင်းနှင့်အတူပြင်းပြင်းထန်ထန်စကေးသော Components [Kundu et al နှင့်အတူ -statistic, Kappa, ။ , 2012] ။ non-BOLD အစိတ်အပိုင်းများအတွက် pseudo- ဖြင့်တိုင်းတာ TE လွတ်လပ်ရေးနေဖြင့်ဖော်ထုတ်နေကြF-statistic, rho ။ components အရှင် [အသီးသီးဟာသူတို့ရဲ့ Kappa နှင့် rho တန်ဖိုးကိုအလေးခြိနျအပျေါအခွခေံ BOLD သို့မဟုတ် Non-BOLD အဖြစ် Kundu et al ခွဲခြားထားပါသည်။ , 2012] ။ ရွေ့လျားခြင်း၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်စကင်နာအပိုပစ္စည်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံမူများအပေါ် အခြေခံ၍ ခိုင်မာသောပုံစံဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ဆူညံသံပဲ့တင်ပြထားသောရုပ်ပုံများကိုသူတို့၏ MPRAGE တွင်အဓိကမှတ်ပုံတင်ထားပြီး Montreal Neurological Institute (MNI) template ကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။ Spatial ချောချောမွေ့မွေ့ Gaussian kernel ကို (အပြည့်အဝအကျယ်တစ်ဝက်အများဆုံး =6မီလီမီတာ) နဲ့ကောက်ယူခဲ့သည်။ voxel တစ်ခုချင်းစီအတွက်အချိန်ကို band-pass (0.008) ဖြင့်စစ်ထုတ်သည် f <0.09 Hz) ။ လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ခန္ဓာဗေဒစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကို GM၊ WM နှင့် CSF ဟူ၍ ခွဲထားသည်။ WM နှင့် CSF မှအချက်အလက်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
CONN-fMRI functional ဆက်သွယ်မှု Toolbox [Whitfield-Gabrieli နှင့် Nieto-Castanon နှင့်အတူ functional ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကျိုးစီးပွားတစ်ဒေသကို သုံး. ဖျော်ဖြေခဲ့သည် (Roi) -driven ချဉ်းကပ်မှု, 2012] SPM များအတွက် (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm8/) ။
ဘာသာရပ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်မေးခွန်းလွှာရမှတ်များကိုအမြီးနှစ်ခုဖြင့်အုပ်စုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် tတန်းတူကှဲလှဲယူဆစရာမလိုဘဲ -tests ။ အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း R ကိုဗားရှင်း (3.2.0) [RC ရေးအဖွဲ့, အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ 2014].
အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက် CSB ဘာသာရပ်များနှင့် HV များအတွက် GM ပမာဏသည်ယေဘုယျ linear model (GLM) သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ အချိုးကျစကေးနှင့် SPM အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမျက်နှာဖုံးကိုအသုံးပြု။ သင်တန်းသားများကိုရဲ့စုစုပေါင်း intracranial အသံအတိုးအကျယ်အဘို့အဒေတာကိုတညျ့ခဲ့သည်။ အုပ်စုနှိုင်းယှဉ် covariates အဖြစ်အသက်နှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ်နှစ်ခုလုံးအတွက်ချိန်ညှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အာရုံစိုက်ခဲ့သည် တစ်ဦး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုမှာဖော်ထုတ်အကျိုးစီးပွားတွေးဆဒေသများ [Voon et al ။ , 2014] နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue reactivity ကိုလေ့လာမှု Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း [Kühnနှင့် Gallinat အတွက် 2011] တညျ့သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ကို အသုံးပြု. အမည်ရလက်ဝဲနှင့်လက်ယာ VS, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ amygdala နှင့် dorsal ACC (SVC) မိသားစုပညာရှိအမှား (FWE) တညျ့ P <0.01 (Bonferroni နှိုင်းယှဉ်မှုများစွာအတွက်တည့်မတ်) ဤအ SVC ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ငါတို့ယခင်ကဖော်ပြထား [VS ခန္ဓာဗေဒ ROI, အသုံးပြုခဲ့သည် [Murray et al ။ , 2008] Martinez et al အားဖြင့် VS ၏အဓိပ္ပါယ်အပေါ်အခြေခံပြီး MRIcro အသုံးပြု. ရေးဆွဲလက်ပြလေ၏။  ။ အဆိုပါ amygdala ရွယ်အဆိုပါအလိုအလျောက် Anatomical LABEL (AAL) Atlas မှရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါ dorsal ACC ကို manually MarsBaR ရွယ် Toolbox [Brett et al သုံးပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ , 2002] နှင့် AAL Atlas ထံမှ cingulate cortex ရွယ်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ဒါဟာ anterior အပိုင်းအခြား Corpus callosum [ကော့ et al ၏ genu ၏အစွန်အဖျားခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ , 2014; Desikan et al ။ , 2006] နှင့် posterior အဆိုပါ Corpus callosum [Desikan et al ၏ genu ၏ posterior အဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ , 2006] ။ BDI ရမှတ်များအတွက်ချိန်ညှိအပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
CSB ဘာသာရပ်များနှင့် HV အကြားဆက်သွယ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန် ROI-to-voxel မြေတပြင်လုံး ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုမြေပုံများကို volumetric group ခြားနားချက်တွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ အကျိုးစီးပွား၏ဘယ်ဘက် amygdala မျိုးစေ့ဒေသအတွက်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုမြေပုံများသည်အသက်အရွယ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှစ်မျိုးလုံးအတွက်နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြင့်အသက်အရွယ်အတွက်ညှိနှိုင်းအုပ်စုများအကြားတစ်ခုလုံး - ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်အပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည့်ဆက်သွယ်မှုမြေပုံများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဦး နှောက်အစုအဝေးတစ်ခုလုံးသည် FWE ကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည် P <0.05 အုပ်စုတစ်စုကွဲပြားမှုများအတွက်သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
လိင်ကွဲအထီး HV လေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့ (စားပွဲတင်နှစ်ဆယ်သုံးလိင်ကွဲ CSB နှင့်အတူယောက်ျား (အသက် 26.9;; SD က 6.22 နှစ်) နှင့် 69 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် (SD က 25.6 နှစ်ပေါင်းအသက်အရွယ် 6.55) 2), 19 CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 55 HV သောအမူအကျင့်မေးခွန်းပြီးစီးခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များ (ပိုမိုမြင့်မား BDI ခဲ့P = 0.006) နှင့် UPPS-P ကို ​​(P HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် <0.001) ရမှတ်များ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံနှင့်ပြင်းထန်မှုအပါအ ၀ င်အခြားအမူအကျင့်ဆိုင်ရာရမှတ်များကိုအခြားနေရာများတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည် [Mechelmans et al ။ , 2014; Voon et al ။ , 2014].
ဇယား ၂။ လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
စံသွေဖီအပေါ်အစီရင်ခံစာများနှင့် PTwo-နမူနာများအတွက် -values t-tests ကွင်းခတ်၌ရှိကြ၏။
4 ထဲကပျောက်ဆုံးနေ 23 သင်တန်းသားများ။
14 ထဲကပျောက်ဆုံးနေ 69 သင်တန်းသားများ။
0-13 ၏ BDI ရမှတ်အနည်းဆုံးစိတ်ကျရောဂါ, 14-19 ပျော့စိတ်ကျရောဂါ, 20-28 အလယ်အလတ်စိတ်ကျရောဂါနှင့် 29-63 ပြင်းထန်စိတ်ကျရောဂါဖော်ပြသည်။
UPPS-P ကိုရမှတ် (59 = အနည်းဆုံးထကြွလွယ်သော; 236 = အများဆုံးထကြွလွယ်သော) Impulse ၏အစီအမံအဖြစ် 59 နှင့် 236 အကြားအထိ 59 ပစ္စည်းများအနေဖြင့်တွက်ချက်စီ 1 နှင့်4အကြား rated နှင့် Impulse ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုကိုယ်စားပြုသော။
အတိုကောက်: HV, ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း; CSB, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ; BDI၊ Beck ၏စီးပွားပျက်ကပ်စာရင်း၊ UPPS-P၊ UPPS-P ထကြွလွယ်သောအပြုအမူစကေး။
CSB (N = ၂၀23) 26.9 (6.22) 14.82 (11.85)a 152.21 (16.50)a
HV (N = ၂၀69) 25.6 (6.55) 6.03 (7.20)b 124.87 (20.73)b
T-value (P-value) 0.88 (P = ၂၀0.380) 3.04 (P = ၂၀0.006) 5.81 (P <0.001)
အဆိုပါရွယ်, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ amygdala ၏လေ့လာဆန်းစစ်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ VS နှင့် dorsal ACC left amygdala မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်, လိုက်ဖက် HV (SVC FWE-တညျ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွထားပါ P = 0.0096, Z = 3.37, XYZ = -28, -4, -15) (Bonferroni SVC FWE-corrected အတွက်တည့်မတ်ပေးခဲ့သည် P <0.01) (ပုံ။ 1) ။ အားလုံးသည်အခြားရွယ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသိသာဘူး။ စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ချိန်ညှိအုပ်စုခြားနားချက်တွေ့ရှိချက်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
PowerPoint ဆလိုက် Download
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် Voxel-based morphometry ။ သာ. ကွီးမွတျလက်ဝဲ amygdala အသံအတိုးအကျယ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုး compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှာပြနေသည်။ အဆိုပါပုံရိပ်မှာ thresholded ဖြစ်ပါတယ် P <0.005 ပုံဥပမာအဘို့အတညျ့။ [အရောင်ပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် wileyonlinelibrary.com]
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးကျနော်တို့ကလက်ဝဲ amygdala အတွက်မျိုးစေ့နှင့်အတူပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအနားယူဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ်နိုင်ငံ DLPFC (ညာဘက် DLPFC နှင့်အတူလျှော့ဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ P = 0.012, Z = 4.11, XYZ = 31 42 16; လက်ဝဲ DLPFC: P = 0.003, Z = 3.96, XYZ = -27 52 23) (ပုံ။ 2) ။ BDI များအတွက်ချိန်ညှိ (ညာဘက် DLPFC တွေ့ရှိချက်များ၏အရေးပါမှုကိုပြောင်းလဲပစ်ဘူး: P = 0.001, Z = 4.54, XYZ = 31 61 23; လက်ဝဲ DLPFC: P = 0.003, Z = 4.26, XYZ = -29 49 35) ။
လက်ဝဲ amygdala ၏ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအနားယူ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုးနှစ်နိုင်ငံ dorsolateral prefrontal cortex (အလယ်တန်းနှင့်ညာ) နှင့်အတူလက်ဝဲ amygdala (အမျိုးအနွယ်, လက်ဝဲဘက်) ၏ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု, အနားယူလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါပုံရိပ်မှာ thresholded ဖြစ်ပါတယ် P <0.005 ပုံဥပမာအဘို့အတညျ့။ [အရောင်ပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် wileyonlinelibrary.com]
ကျနော်တို့လိုက်ဖက် HV နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ CSB ဘာသာရပ်များလက်ဝဲ amygdala အသံအတိုးအကျယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လက်ဝဲ amygdala နှင့်နှစ်နိုင်ငံ DLPFC အကြားကြွင်းသောအရာစဉ်အတွင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျှော့ချခဲ့သည်။
အဆိုပါ amygdala အပြုအမူညွှန်ကြားကြောင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင် salience အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ အဆိုပါ amygdala link ကို၏အရေးပါထိခိုက်စေတန်ဖိုးကိုအသင်းကိုယ်စားနှင့်အတူယခင်ကကြားနေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးလှုံ့ဆော်မှု, cue-သွေးဆောင်စိတ်ခွန်အားနိုး salience [Everitt et al ဝါဒဖြန့်။ , 2003] အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ် [Cardinal et al ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့။ , 2002; Gottfried et al ။ , 2003] ။ တိုးမြှင့် amygdala volume ၏တွေ့ရှိချက်အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်အပေါ်အများအပြားလေ့လာမှုများ [Makris et al နှင့်အတူအတိုက်အခံ၌တည်ရှိ၏။ , 2008; Wrase et al ။ , 2008] စွဲအစီရင်ခံစာ၏ဤအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာမှုများအဖြစ်ထုထည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ပြီဘယ်မှာ volumes ကို, amygdala လျော့နည်းသွားသည်။ ဒီကွာဟမှုများအတွက်အလားအလာရှင်းပြချက်ကြာရှည် neuroplastic အပြောင်းအလဲများနှင့်အဆိပ် [Kovacic အတွက်ကြောင့်ရေရှည်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရလဒ်ဖြစ်ပါသည် 2005; Reissner နှင့် Kalivas, 2010] မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူ [ဓာတ်ငွေ့နှင့်သံလွင်၏ဇွဲအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, 2008] ။ ထိုသို့သော neurotoxicity ဆက်ဆက် Bartzokis et al [ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုလေ့လာသည့်ကျယ်ပြန့်ကျုံ့အထောက်အကူပြုပေမည်။ , 2000; Carlen et al ။ , 1978; Mechtcheriakov et al ။ , 2007] ။ ထိုသို့သောမူးယစ်ဆေး-related neurotoxicity ဖွယ်ရှိ Sud အတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်ပြဿနာတစ်ရပ်၏လျော့နည်း။ fMRI သုံးပြီးမကြာသေးခင် CSB လေ့လာမှုမှာ non-CSB ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့ Voon et al [သည့် amygdala ၏ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ , 2014] ။ amygdala volume ထဲမှာခြားနားချက် CSB မှတစ်ဦးချင်းစီ predisposing တစ်ဦး Pre-ရှိပြီးသားရိုသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းရှိမရှိထူထောင်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါ DLPFC ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကောင်းကောင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏ကျယ်ပြန့်ရှုထောင့်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများ [Macdonald et al ဖြစ်ပါတယ်။ , 2000] နှင့်မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင် [Petrides, 2000] ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် amygdala တို့အကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် DLPFC သည်ဤဒေသများအတွင်းဆက်သွယ်မှုအပေါ်လက်ရှိစာပေနှင့်အတူပါတယ်။ ဒါဟာ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုသည်ယခင်ကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ Impulse ၏အဆင့်မြင့် [Ko et al နှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် amygdala နှင့် DLPFC အကြားကြောင်းလျှော့ဆက်သွယ်မှုအစီရင်ခံထားပါတယ်ထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ , 2015] ။ သိမြင်မှုနည်းဗျူဟာများ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု modulate ဖို့စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာနောက်ထပ်လေ့လာမှု amygdala လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ covaried DLPFC, အပါအဝင်တိုကျရိုကျ cortex ၏တိကျသောဒေသများအတွက်လှုပ်ရှားမှုပြနှင့်ဤဒေသများအကြားကြောင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုထဲမှာသိမြင်မှုနည်းဗျူဟာများလျှောက်ထားအပေါ်မှီခိုခဲ့ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်း [ဘဏ်များ et al ။ , 2007] ။ Amygdala နှင့် DLPFC ဆက်သွယ်မှုအလားတူရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါ [Siegle et al နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ , 2007] ။ CSB စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်စိတ်ကျရောဂါရမှတ်မသက်ဆိုင်သောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DLPFC လည်း [ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်ကြည့်ရှုသည့်အခါ သာ. ကြီးမြတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု DLPFC နှင့် striatum အကြားအနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သည့်အတွက်အထီး HV တစ်လေ့လာမှုမှာKühnနှင့် Gallinat ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည် 2014].
ကျနော်တို့အထူးသကျနော်တို့လိုက်ဖက် HV ၏ကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အတူဤအုပ်စုသည်နှိုင်းယှဉ်သော်လည်းထိုအတွေ့ရှိချက် CSB ဘာသာရပ်များ၏သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားပေးထားသောပဏာမဖြစ်ကြောင်းသတိထား။ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာန့်အသတ်လူဦးရေ၏တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦး mechanistic အခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါ, သောအခြား comorbid စိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူဘာသာရပ်များမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, ဤရလာဒ်များသတိနဲ့အခြား comorbidities နှင့်အတူ CSB ဘာသာရပ်များမှ extrapolated ရပါမည်။ ထို့ပြင် CSB ဘာသာရပ်များတို့တွင်လေ့လာတွေ့ရှိဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်မူမမှန်စရိုက်များ-ရှိပြီးသား pre နှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ် CSB ၏သက်ရောက်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောဒီလေ့လာမှုအဖြစ် CSB ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခြလုပ်လို့မရပါဘူး။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပြည်နယ်နှင့်ရိုသဘောထားတွေနဲ့ပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားနှင့်ရောထွေးလိင်နှင့်အတူအလားအလာ Pre-နေကြလို့ပဲအာရုံကြောမူမမှန်အကြားခြားနားချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန် longitudinal အစီအမံအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အထက်မှအောက်သို့တစ်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ်ပတ်သက်နေဒေသနှင့် prefrontal ၏အောက်ပိုင်းကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်ကိုခြီးမွှောကျ volumes ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထိုကဲ့သို့သောကွန်ရက်ပြတ်တောက်မက်လုံးပေးတွေကိုအဓိကရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဓိကဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တိုးမြှင် reactivity ကိုမျက်နှာထစ်အငေါ့အမူအကျင့်ပုံစံများကိုရှင်းပြလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုထည်ကြီးမားသောတွေ့ရှိချက် Sud အတွက်သူတို့နှင့်အတူနှိုငျးယှဉျပေမယ့်အဲဒီတွေ့ရှိချက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏ neurooxic သက်ရောက်မှုတစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားအထူးသဖြင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီထောက်ပံ့ထားတဲ့စွဲလမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူအလားအလာထပ်အကြံပြုထားသည်။ ငါတို့သည်ဤ salience ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုထို့နောက်အလွန်အမင်းအဓိကသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို [အမှတ်တံဆိပ် et al ပိုမိုနှစ်သက်ထိတွေ့အောက်ပါတိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်ပြသကြ။ , 2016; seok နှင့် Sohn, 2015; Voon et al ။ , 2014] တိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [Mechelmans et al နှင့်အတူ။ , 2014] နှင့်အထွေထွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ [အမှတ်တံဆိပ် et al လိင် cue မှတိကျတဲ့သော်လည်းမအလိုရှိကြသည်။ , 2016; Voon et al ။ , 2014] ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှ Enhanced အာရုံကိုနောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု [BANCA et al အကြားဆက်ဆံရေးကိုအတည်ပြုအရှင်လိင်အေးစက်တွေကိုအဘို့အ preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ , 2016] ။ သည်းခံစိတ်၏အယူအဆနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်တသမတ်တည်းလေ့တိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်လိင်အေးစက်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်သောတိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှုဤတွေ့ရှိချက်ရလဒ် (သို့မဟုတ်ခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွ) ၏ကှာခွား, ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု [BANCA et al များအတွက် preference ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ , 2016] ။ အတူတူကဤတွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သောကုထုံးအမှတ်အသားများ၏ရောဂါနှင့်မှတ်ပုံတင်တစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်နားလည်မှုဆီသို့ဦးဆောင် CSB ၏အခြေခံ neurobiology elucidate ကိုကူညီပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့ကသူတို့အချိန်နှင့်ကတိကဝတ်များအတွက်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အကူအညီပုံရိပ်ဒေတာစုဆောင်းနှငျ့၎င်းငျး, ငါတို့သင်တန်းသားများကိုများအတွက် WBIC န်ထမ်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့လေ့လာမှုအတှကျလူနာလွှဲပြောင်းဘို့ Thaddeus Birchard နှင့် Paula ခန်းမကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ အဆိုပါအပြုအမူများနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံအင်စတီကျု (BCNI) က Wellcome Trust မှနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကထောက်ခံသည်။
Ashburner J ကို (2007): တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း diffeomorphic image ကိုမှတ်ပုံတင် algorithm ကို။ Neuroimage 38: 95-113 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 2070
BANCA P ကို, မောရစ် LS, Mitchell က S နဲ့, Harrison NA, Potenza MN, Voon V ကို (2016): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများ, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res 72: 91-101 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 2
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 307
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 75
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 18323
ဘဏ်များ SJ, Eddy KT, Angstadt M က, နေသန် PJ, ဖန် KL (2007): စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း Amygdala-တိုကျရိုကျဆက်သွယ်မှု။ 2-303: Soc Cogn neuroscience 312 အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1087
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 342 |
Bartzokis, G, Beckson M က, Lu က PH သည်, Edwards က N ကို, Rapoport R ကို, Wiseman အီး, တံတား P ကို ​​(2000): စိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းစွဲခြင်းနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ခေတ်-related ဦးနှောက်အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချ: စွဲသုတေသနများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res Neuroimaging 98: 93-102 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 16 |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1782
Wiley အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက် |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 245
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 217
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 597 |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 19
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 27
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 172
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 5
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 30
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 63
Beck ကို AT, ရပ်ကွက်ကို C, Mendelson M (1961): Beck စိတ်ကျရောဂါစာရင်း (BDI) ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 561-571 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1895 |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 134
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 313
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က, Snagowski J ကို, Laier ကို C, Maderwald S ကို (2016): နှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါ entral striatum လှုပ်ရှားမှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 129: 224-232 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited:7|
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 70
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 196
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 255
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 3
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 20
Brett M က, Anton JL, Valabregue R ကို, Poline JB (2002): စိတ်ဝင်စားမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဒေသကြီး SPM 99 များအတွက် MarsBar Toolbox ကိုသုံးနိုင်သည်။ Neuroimage 16: S497 ။
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 43
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 7675
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 383
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 4
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 38
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 110
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 25
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 1108
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 92
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 72 |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 31 |
Science® Times သတင်းစာ၏ Web ကို Cited: 66
Cai ကို C, ယွမ် K ကိုယဉ် J ကို, Feng တို့ D:, Bi Y ကိုလီ Y ကို, ယု D ကို, Jin ကနေ C, Qin W က, Tian J ကို (2015): Striatum morphometry အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလိုငွေပြမှုနှင့်လက္ခဏာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေသည်။ ဦးနှောက် Imaging ကနျစှာနထေို 10: 12 ။
Cardinal RN, ပါကင်ဂျာခန်းမ J ကို, Everitt BJ (2002): Emotion နှင့်လှုံ့ဆော်မှု: အ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ, ventral striatum နှင့် prefrontal cortex ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 26: 321-352 ။
Carlen PL, Wortzman, G, Holgate RC, Wilkinson DA, Rankin JC (1978): တွက်ချက် tomography Scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်မကြာသေးမီက abstinent နာတာရှည်အရက်သမားအတွက်ပြောင်းပြန်နှောက်ကျုံ့။ သိပ္ပံ 200: 1076-1078 ။
Carnes P ကို, Delmonico DL, Griffin အီး (2007): အဆိုပါ Net က၏အရိပ်၌: compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Breaking အခမဲ့, 2nd ed ။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ထုတ်ဝေရေး။
Connolly CG, ဘဲလ် RP, Foxe JJ, Garavan H ကို (2013): ကိုကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာစွဲလမ်းနှင့်တိုးချဲ့ abstinence နှင့်အတူမီးခိုးရောင်ကိစ္စအပြောင်းအလဲများကို Dissociated ။ PLoS တစ်ခုမှာ 8: e59645 ။
ကော့ SR, ဖာဂူဆန် KJ, Royle NA, Shenkin SD, MacPherson SE, MacLullich AMJ, Deary IJ, Wardlaw JM (2014): သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အတွက်ဦးနှောက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကှကျနည်းစနစ်တစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ဦးနှောက် Struct Funct 219: 1-22 ။
Desikan RS, Ségonneက F, Fischl B, Quinn BT, Dickerson ဘီစီနီ: D, Buckner RL, Dale လေး, Maguire RP, Hyman BT (2006): gyral အခြေစိုက်ဒေသများသို့ MRI Scan ဖတ်ပေါ်ကလူ့ဦးနှောက် cortex subdividing များအတွက်တစ်ဦး automated တံဆိပ်ကပ်မှုစနစ် အကျိုးစီးပွား။ Neuroimage 31: 968-980 ။
Everitt BJ, Cardinal RN, ပါကင်ဂျာ Robbins TW (2003): အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူ: စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု၏ amygdala-မှီခိုယန္တရားများ၏သက်ရောက်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 985: 233-250 ။
ဓာတ်ငွေ့ JT, သံလွင် MF (2008): မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အရက်၏ Glutamatergic အလွှာဟာ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol 75: 218-265 ။
Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ (2003): လူ့မိခင်နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုချီးမြှင့်တန်ဖိုးကို encoding ။ သိပ္ပံ 301: 1104-1107 ။
လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက်လျှော့ချ cortical အထူ: တစ်ဦးက morphometric MRI လေ့လာမှု je, Odlaug BL, Chamberlain SR (2015) ပေးသနား။ EUR Arch စိတ်ရောဂါကုသမှု Clin neuroscience 265: 655-661 ။
ဗန် Holst RJ, က de Ruiter ကို MB, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က, Veltman DJ သမား, Goudriaan AE (2012): ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေ, အရက်ချိုးဖောက်မှုများ, ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးက voxel-based morphometry လေ့လာမှု။ 124-142: မူးယစ်ဆေးအရက် 148 မူတည်တယ်။
ဟောင်ကောင် SB ကင်မ် JW, Choi EJ ကင်မ်နာရီ, Suh je ကင်မ် CD ကို, Klauser P ကို, Whittle S က, Yűcel M က, ဘောင်းဘီကို C, ရီ SH (2013): အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူအထီးမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာလျှော့ချ orbitofrontal cortical ထူ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Funct 9: 11 ။
Joutsa J၊ Saunavaara J, Parkkola R, Niemelä S, Kaasinen V (၂၀၁၁) ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတွင် ဦး နှောက်ဖြူကိစ္စ၏သမာဓိကိုပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res - Neuroimaging 2011: 194-340
Kafka အမတ် (2010): Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 377-400 ။
ko CH, Hsieh ကတီဂျေ, ဝမ် PW, လင်း WC, ယန်း CF, Chen က CS, ယန်း JY (2015): ALTER မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် amygdala ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 57: 185-192 ။
Koehler S က, Hasselmann အီး, Wüstenberg T က, Heinz တစ်ဦးက, Romanczuk-Seiferth N ကို (2013): ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် ventral striatum ၏အဆင့်မြင့်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ညာဘက် prefrontal cortex ။ ဦးနှောက် Struct Funct 220: 469-477 ။
Kovacic P ကို ​​(2005): dopamine နဲ့အချိုမှုပြုပြီဖို့လျှောက်လွှာနှင့်အတူနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်အဆိပ်အတောက်များအတွက် unified ယန္တရား: Electron လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ဓာတ်ပြုအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ်။ Med ယူဆချက် 65: 90-96 ။
Kraus SW, Voon V ကို, Potenza MN (2016): compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: လွန်မြောက်သိပ္ပံ။ Neuropsychopharmacology 41: 385-386 ။
Kühn S က, Gallinat J ကို (2011): ဥပဒေနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ-တစ် cue-reactivity ကိုဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက် Meta-analysis သည်ကိုဖြတ်ပြီးတဏှာ၏ဘုံဇီဝဗေဒ။ EUR J ကို neuroscience 33: 1318-1326 ။
Kühn S က, Gallinat J ကို (2014): ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု: porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု 71: 827-834 ။
Kundu P ကို, Inati SJ, အီဗန် JW, Luh WM, Bandettini ကို PA (2012): Multi-ပဲ့တင်သံ EPI သုံးပြီး fMRI အချိန်စီးရီးအတွက် BOLD နှင့် Non-BOLD အချက်ပြမှုများကွာခြား။ Neuroimage 60: 1759-1770 ။
Lin က X ကိုသည် Dong, G, ဝမ်မေး, ဒူက X (2014): ပုံမှန်မဟုတ်သောမီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်အဖြူကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်စွဲပြုမူနေ 40C "အင်တာနက်ကိုဂိမ်းစွဲ။ ": 137-143 ။
Macdonald AW, Cohen ကို JD, Stenger VA သို့, Carter က CS (2000): သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် dorsolateral prefrontal နှင့် anterior cingulate cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို Dissociating ။ သိပ္ပံ 288: 1835-1838 ။
Makris N ကို, အော်စကာ Berman က M, Jaffin SK ကို, Hodge သည် SM, ကနေဒီ DN, Caviness VS, Marinkovic K ကို Breiter HC, Gasic မိသားစုဆရာဝန်, Harris က GJ (2008): အရက်ထဲမှာဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အသံအတိုးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 64: 192-202 ။
Martinez: D, Slifstein M က, Broft တစ်ဦးက, Mawlawi အို Chatterjee R ကို, Hwang DR, Huang က Y ကို, Cooper က T က, Kegeles L ကို, Zarahn အီး, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Haber SN, Laruelle M (2003): အတူ Imaging လူ့ mesolimbic dopamine ဂီယာ positron ထုတ်လွှတ် tomography ။ အပိုင်း II ကို: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 23: 285-300 ။
Mcgahuey CA, Gelenberg AJ၊ Cindi A၊ Moreno FA၊ Delgado PL, Mcknight KM, Manber R (၂၀၁၁) - လိင်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး၏အာရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေး (asex) - ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်တရားဝင်မှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2011: 26-37 ။
Mechelmans DJ သမား, Irvine M က, BANCA P ကို, Porter L ကို, Mitchell က S နဲ့, မှဲ့တီဘီ, Lapa TR, Harrison NA, Potenza MN, Voon V ကို (2014): နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PLoS တစ်ခုမှာ 9: e105476 ။
Mechtcheriakov S က, Brenneis ကို C, Egger K ကို Koppelstaetter က F, Schocke M က, Marksteiner J ကို (2007): voxel-based morphometry အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသအရက်စွဲနှင့်အတူလူနာနှောက်ကျုံ့၏ကျယ်ပြန့်ကွဲပြားပုံစံ။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု 78: 610-614 ။
Miner MH, Raymond N, Mueller B. a, Lloyd M, Lim KO (2009): မလိုမုန်းထားသည့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စိတ်တက်ကြွသောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res - Neuroimaging 174: 146-151 ။
Murray GK, Corlett PR စနစ်, Clark က L ကို, Pessiglione M က, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, ပျားရည်, G, ဂျုံးစ် PB, Bullmore ET, Robbins TW, ဖလက်ချာကို PC (2008): Substantia nigra / စိတ္တအတွက် ventral tegmental ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားနှောင့်အယှက်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 13: 267-276 ။
Petrides M (2000): အလုပ်လုပ်ကိုင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာနှစ်လယ်ပိုင်း dorsolateral prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Exp ဦးနှောက် Res 133: 44-54 ။
Prause N ကို, သံမဏိ VR, Staley ကို C, Sabatinelli: D, Proudfit GH (2015): "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုပြဿနာအသုံးပြုသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation ။ Biol Psychol 109: 192-199 ။
Rando K ကို Tuit K ကို Hannestad J ကို, Guarnaccia J ကို, Sinha R ကို (2013): တစ်ဦးက voxel-based morphometric လေ့လာမှု: ကင်းမှီခိုအတွက်လျော့နည်းသွား limbic နှင့် cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ volume ထဲမှာလိင်ကွဲပြားမှု။ စှဲလမျးသူ Biol 18: 147-160 ။
RC အဖွဲ့ (2014): R ကို: စာရင်းအင်းကွန်ပျူတာများအတွက်တစ်ဦးကဘာသာစကားများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး။ ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား: စာရင်းအင်းကွန်ပျူတာများအတွက် R ကိုဖောင်ဒေးရှင်းမှ။ ISBN 3-900051-07-0 ။
ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, Gilliland R ကို, Cooper က eb, McKittrick H ကို, Davtian M က, Fong သည် T က (2012): hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med 9: 2868-2877 ။
Reissner KJ, Kalivas PW (2010): စွဲလမ်းမမှန်ကုသများအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်အချိုမှု homeostasis အသုံးပြုခြင်း။ ပြုမူနေ Pharmacol 21: 514 ။
seok JW, Sohn JH (2015): ပြဿနာ hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience 9: 1-11 ။
Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, Weiller အီး, Hergueta T က, Baker R ကို, Dunbar မှာ GC (1998): အဆိုပါ Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (mini ကို): တစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတည်ပြု DSM-IV နှင့် ICD-10 သည်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 59: 22-33 ။
Siegle GJ, Thompson ကဒဗလျူ, Carter က CS, Steinhauer SR, Thase ME (2007): တိုးမြှင့် amygdala နှင့်ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါအတွက် dorsolateral prefrontal BOLD တုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွား: Related နှင့်လွတ်လပ်သော features တွေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 198-209 ။
နေရောင် Y ကို Sun, J ကို, Zhou Y ကို, Ding W က, Chen က X ကို, Zhuang Z ကို, Xu J ကို, ဒူ Y ကို (2014) in: များ၏အကဲဖြတ် Vivo အင်တာနက်ဂိမ်းကစားစွဲအတွက် DKI သုံးပြီးမီးခိုးရောင်အမှု၌ microstructure ပွောငျးလဲ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Funct 10: 37 ။
Taki Y ကို, Kinomura S က, Sato K ကို Goto R ကို, Inoue K ကို Okada K ကို Ono က S, Kawashima R ကို, ဖူကူ H ကို (2006): ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဒေသတွင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှစ်ဦးစလုံးအနုတ်လက္ခဏာ Non-အရက်ထဲမှာတစ်သက်တာအရက်စားသုံးမှုနှင့်အတူပတျသကျ -dependent ဂျပန်ယောက်ျား: တစ်ဦးကထုထည်ကြီးမားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး voxel-based morphometry ။ အရက် Clin Exp Res 30: 1045-1050 ။
Tanabe J ကို, Tregellas JR, Dalwani M က, Thompson က L ကို, Owen အီး, Crowley T က, Banich M (2009): Medial orbitofrontal cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စ abstinent ပစ္စည်းဥစ္စာ-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ကိုလျှော့ချထားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 65: 160-164 ။
Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့, Lapa TR, Karr J ကို, Harrison NA, Potenza MN, Irvine M (2014): နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှု ။ PLoS တစ်ခုမှာ 9: e102419 ။
ဝမ် H ကို, Jin ကနေ C, ယွမ် K ကို Shakir TM, မော်စီတုန်း, C, Niu X ကို, Niu ကို C, Guo L ကို, Zhang က M ကို (2015): အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အပြောင်းအလဲတချို့။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience 9: 1-7 ။
Weng သမဝါယမ, Qian RB, ဖူ XM, လင်းခ, ဟန် XP ကို, Niu CS, ဝမ် YH (2013): Grey ကကိစ္စနှင့်အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းဖြူကိစ္စမူမမှန်။ EUR J ကို Radiol 82: 1308-1312 ။
Whiteside SP, Lynam DR (2001): အဆိုပါငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်အသုံးပြုခြင်း။ Pers Individ ကွဲပြားမှု 30: 669-689 ။
Whitfield-Gabrieli S က, Nieto-Castanon တစ်ဦးက (2012): ဆက်စပ်နှင့် anticorrelated ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုတစ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု Toolbox ။ ဦးနှောက် Connect ကို 2: 125-141 ။
Wrase J ကို, Makris N ကို, Braus DF, မန်း K ကို Smolka MN, ကနေဒီ DN, Caviness VS, Hodge သည် SM, တန် L ကို, Albaugh M က, Ziegler ဃတစ်ဦး, Davis က OC, Kissling ကို C, Schumann, G, Breiter HC, Heinz တစ်ဦးက ( 2008): အရက်အလွဲသုံးစားမှု relapse နှင့်တဏှာနဲ့ဆက်စပ် Amygdala အသံအတိုးအကျယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 165: 1179-1184 ။
Xiao P ကို, ဒိုင် Z ကို, Zhong J ကို, Zhu Y ကို, ရှီ H ကို, ပန် P ကို ​​(2015): အရက်မှီခိုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်ကိစ္စလိုငွေပြမှု: voxel-based morphometry လေ့လာမှု Meta-analysis သည်။ 153-22: မူးယစ်ဆေးအရက် 28 မူတည်တယ်။
ယွမ် K ကို Qin W က, ဝမ်, G, Zeng က F, Zhao နှင့် L ကို, ယန်က X, လျူ P ကို, လျူ J ကို Sun, J ကို, ဗွန် Deneen KM, Gong မေး, လျူ Y ကို, Tian J ကို (2011): အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက် Microstructure မူမမှန် ရောဂါ။ PLoS တစ်ခုမှာ 6: e20708 ။
ယွမ် K ကို Cheng P ကိုသည် Dong T က, Bi Y ကို, Xing L ကို, ယု D ကို, Zhao နှင့် L ကိုသည် Dong M က, ဗွန် Deneen KM, လျူ Y ကို, Qin W က, Tian J ကို (2013): အွန်လိုင်းဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်အတူနှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် cortical ထူမူမမှန် ။ PLoS တစ်ခုမှာ 8: e53055 ။
zhou Y ကို, လင်း FC အသင်း, ဒူ YS, Qin ld, Zhao နှင့် ZM, Xu JR, လဲ့ H ကို (2011): အင်တာနက်စွဲအတွက် Grey ကကိစ္စမူမမှန်: တစ်ဦးက voxel-based morphometry လေ့လာမှု။ EUR J ကို Radiol 79: 92-95 ။